Wool wuxuu dareemay warshad - Shiinaha Wool wuxuu dareemey soosaarayaal, Iibiyaal
DHAMMAAN CARUURAHA SHAQADA
Cirbadda Wejiga oo la jeexjeexay
Qalabkayaga isku-dhafka ah ee Wajiga Isku-dhafka ah waa isku-darka 30% dhogorta iyo 70% rayon / viscose, oo lagu taliyay sidii farsamo gacmeed tayo sare leh ama bedel weyn 100% dhogorta la dareemay. Premium Felt wuxuu leeyahay cufnaanta weyn ee fiber, kaas oo bixiya labadaba siman, dhar jilicsan-u eg iyo midab hodan ah. Waxay kale oo ay la jaanqaadeysaa heerka Oeko-Tex, taasoo ka dhigaysa mid ammaan u ah dhallaanka iyo carruurta. Abuur dhar, boombalo, farshaxan, iyo farshaxan leh noocyo farabadan oo midabbo leh oo aad kala dooran karto. Isku-darka fiber kiimiko iyo fiilo dhogor ah, waxay ka dhigi kartaa feerka ...
Qalabka:xarkaha polyester iyo dhogor dhogor ah,
Xayr iyo dhogorta dhogorta leh,
polypropylene iyo fiilo dhogor ah,
fiberka iyo dhogorta dhogorta,
PLA iyo fiber dhogor iwm
Teknolojiyada: irbad aan tolan ahayn ayaa la ruxay